Ny sary Maertre Mert Alas, izay vao nankalaza ny faha 47 taonany dia hahatsiaro io fitsingerenan'ny andro nahaterahana io. Kate Moss dia tsy tonga fotsiny mba hiarahaba ny lamaody mpaka sary amin'ny anaran'ny andro, ary nitsambikina avy tao anaty mofomamy, nihira Happy Birthday ho azy.
Ny Alatsinainy hariva, ireo namana maro avy amin'i Mert Alas, izay ao anaty daba iray miaraka amin'i Marcus Piggott, dia miara-miasa amin'ny magazay am-pilaminana, marika ary asa miaraka amin'ireo olo-malaza, nivory tao amin'ny toeram-pisakafoanana malaza Mayfair tany Londres mba hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Anisan'ireo hatsarana malaza izay tonga tao amin'ilay fety, i Natalia Vodyanova, Lindsay Lohan, Natasha Poli, Alice Dallal, Dautzen Cruz, Naomi Campbell, Lupita Niongo ary ny hafa.
Kate Moss sy Mert Alas
Mert Alas sy Lindsay Lohan
Kate Moss, 44 taona antsoina hoe Mmm, izay niara-nipetraka tamina taona maro nifandimby tamin'i Murth, dia niarahaba azy manokana ihany koa. Tao amin'ny modely ambony, izay natsangana tamin'ny volana desambra, dia nisy akanjo midi-paty mareva-doko, voaravaka mofomamy mamirapiratra. Ny sary malaza dia vita tamin'ny kapa volamena mivolom-baravarankely misy kiraro sy kiraro. Nanipy volo teo ambonin'ny sorony izy.
Kate Moss tamin'ny fetin'ny mpaka sary Murt Alas
Arahabaina miaraka amin'ny fanahy
Tamin'ny fara-tampon'ny hariva, rehefa tonga ny fotoana hahatongavan'ny mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahana, i Moss dia tsy nahatazana an-dàlam-be ho an'ireo seho mba hanomanana ny fahagagana mahatsiravina. Nitsambikina avy tao anaty mofomamy ilay supermodel ary nipetraka teo amin'ny sisin'ny fanorenana karambesina, dia nanao ny Happy Birthday nentianao ho anao.
Ho an'ny Ala, dia tsy nampoizina ny saka avy tao Kate. Angamba tsy mety ny fampahalalànany feo, fa noho ny fahatsapana sy ny fahaiza-mamorona, ny mpihaino dia nanome ny tehaka mpihantsy sy tehaka sy tehaka.
Ny famoahana an'i Mert Alas (@mertalas)
Mariah Carey: tsy mifehy ny fahaverezan'ny lanjany?
Fahefana: ny Lionel Messi sy Antonella Rokuzzi dia miandry ny zaza fahatelo
Fanolokoloana britika britanika-2016 Awards sy mpandresy
Justin Therou dia manana fialantsasatra miafina!
Kylie Jenner dia nanamboatra peratra misy vato lehibe
Tom Felton sy Emma Watson
Kodiarana steak ao anaty lafaoro
Inona no karazana alikadia marary?
Ny fitsaboana ny streptoderma amin'ny ankizy
Nootropil - famantarana ny fampiasana
Mivarotra menaka - fananana medikaly sy fanoherana
Zinnat ho an'ny ankizy
Sakafo ho an'ny saka
Ahoana ny fikajiana ny fambolena ho an'ny zazalahy iray?
Sakafo maimbo amin'ny yogourt - recipe
Mitandrina: 45 hevitra tsara indrindra